Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Subhashish Panigrahi, hampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ho an’ny herinandro 6 – 12 Aogositra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Septambra 2019 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra Christie Maria James Nandika miora
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Subhashish Panigrahi (@subhapa ) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Ny làlana nodiaviko teo amin'ny sehatry ny asa dia ny fametrahana vondrom-piarahamonina Aterineto / loharanom-baovao / fahalalàna misokatra sy ireo fandaharanasa amin'ny sehatra tsy mampidi-bola toy ny Internet Society, Wikimedia Foundation, Mozilla ary ny Ivon-toerana ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina. Mpamokatra hononantsary fanadihadiana aho ary telo amin'ireny no amin'ny anarako sy miresaka momba ny zo sy ireo vondrom-piarahamonina, izay tohanan'ny National Geographic. Mpanoratra amin'ny Global Voices ihany koa aho ary mpandray anjara mavitrika amin'ny Rising Voices, izay mpikotrika ihany koa ny maro tamin'ireo asako marobe ara-nomerika ahitana ny fiantsorohana sy fanohanan'i Eddie Avila, talen'ny Rising Voices. Na dia tsy miteny ny fiteny teratany aza aho, dia nanomboka niara-niasa akaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina Santali tamin'ny taona 2014, tamin'izany fotoana izany nitarika ny tetikasa Ol Chiki  tao amin'ny Fandaharanasa Fanovozam-pahalalana an'ny Center for Internet Society ka tanjona tamin'izany ny famoronana endritsoratra ho fampianarana mamaky teny sy manoratra ny Ol Chiki (fomba fanoratana ny fiteny Santali), fitaovana fanoratana sy loharano fanabeazana misokatra . Taty aoriana kely tamin'ny taona 2017, nahetsiko indray ilayy tetikasa OpenSpeaks  izay noforoniko tamin'ny taona 2015 mba hamoronana loharanom-baovao misokatra (ara-pedagojika, teknika ary media) mba hanampiana an'ireo vondrom-piarahamonina hitahiry ireo fiteny andalam-pahaverezana sy ireo fiteny hafa natao anjorom-bala. Niaraka tamin'ireo namana hafa tao amin'ny Wikimedia nitovy firehana tamin'ny tena, niara-namorona ny O Foundation (OFDN) aho, fikambanana iray tsy mampidi-bola izay miasa mikasika an'ireo olana natao anjorom-bala teo amin'ny Aterineto, amin'ny fomba mangaraharaha, ny fandresena lahatra ary ny fampiroboroboana ireo media tao anatiny.
Odia no tenin-drazako ary ny fiteny avy any avaratra antsoina hoe Baleswari no iresahako ao an-trano. Tsara ihany ny zava-misy, satria marobe ireo fanamby mila atrehana. Fiteny ofisialy ho an'ny fanjakana Indiana ao Odisha ilay teny ary nampiasaina tany amin'ny ambaratonga voalohany hatreny amin'ny fanomanana ‘maîtrise’, ary na dia any ivelan'ny fanabeazana aza. Tokony mbola ampiasaina betsaka koa izy any amin'ny fitantanana sy ny sehatry ny fitsarana. Misy indositria mavitrika ho an'ny horonantsary sy ireo media. Nohon'ny fisian'ireo fampiharana anaty finday, marobe ireo mpampiasa Aterineto avy amin'ireo vondron-taona rehetra no mizara votoaty ety amin'ny aterineto ankehitriny, anisan'izany ny anatin'ireo tambajotra sosialy. Misy ny Wikipedia amin'ny teny Odia  ary roa amin'ireo tetikasa rahavaviny – Wikisource  sy ny Wiktionary  izay mbola mavitrika amin'izao fotoana izao izay ahitana mpandray anjara an-tsitrapo manodidina ny 25 eo ho eo. Marobe ireo bilaogy sy tranokalam-baovao sy literatiora an-tambajotra ary hafa koa. Misy ihany koa ireo andiana fantsona Youtube, anisan'izany ireo vlogs iresahana sakafo.
Koa satria ny herinandro itantanako dia atao mandritra ny Andro Iraisam-pirenena natokana ho an'ireo vahoaka teratany , andro iray nataon'ny Firenena Mikambana mba hankalazana ny fahasamihafan'ny vahoaka teratany manerantany, dia hozaraiko ny sasantsasany amin'ireo olana, fanamby ary zavatra mety atao mifandraika amin'ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika eo amin'ny faritra misy ahy – Azia Atsimo. Niaraka niasa ihany koa tamin'ireo vondrom-piarahamonina marobe aho ary ankehitriny dia miaraka miasa amin'i Ramjit Tudu, namana iray sady mpikatroka nomerika ho an'ny fiteny avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Santali izay mitarika ny Filankevitry ny vondrom-piarahamonina natao ankilabao  ao amin'ny O Foundation – Ho zaraiko ny fianarana azo avy amin'ireo mpitarika vondrom-piarahamonina marobe natao ankilabao, avy amin'ny fihaonana voalohany nataon'ilay filankevitra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/10/142449/
 tetikasa Ol Chiki: http://mediawiki.org/wiki/Project%20Ol%20chiki
 Wikipedia amin'ny teny Odia: https://or.wikipedia.org/
 Andro Iraisam-pirenena natokana ho an'ireo vahoaka teratany: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples/international-day-2019.html
 Filankevitry ny vondrom-piarahamonina natao ankilabao: https://theofdn.org/blog/marginalized-community-council/